Ny hevi-diso diso 5 an'ny haino aman-jery sosialy momba ny orinasa | Martech Zone
Ny hevi-diso diso hevitra momba ny orinasa sosialy 5
Friday, May 16, 2014 Alahady, May 25, 2014 Douglas Karr
Vao haingana aho no nadinadinina ary nanontaniana hoe inona no hevi-diso ataon'ny orinasa rehefa mamolavola sy mampihatra ny paikadin'ny media sosialy. Ny zavatra niainako dia mety mifanohitra amin'ireo mpampianatra maro any, saingy - amin'ny fahatsorana rehetra - heveriko fa matotra ihany ity indostria ity ary miteny ho azy ireo ny valiny.
Hevi-diso momba ny haino aman-jery sosialy # 1: Channel Media ny Marketing Social
Matetika ny orinasa dia mijery ny media sosialy a fantsona marketing. Ny media sosialy dia a fantsom-pifandraisana azo ampiasaina amin'ny marketing - fa tsy fantsom-barotra fotsiny. Ny zavatra voalohany iharan'ny orinasa rehefa mahazo amin'ny haino aman-jery sosialy dia matetika fitarainana - ary ankehitriny dia mila mamaha izany amin'ny fomba mahomby izy ireo satria mijery an'izao tontolo izao. Ny tambajotra sosialy no andrasan'ny mpanatrika na eo aza ny fahitan'ny orinasanao ny fantsona tokony ampiasaina. Ny tsy fandraisana andraikitra amin'ireo fangatahana ireo dia hamotika ny paikady ara-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy nomaninao.
Hevi-diso momba ny haino aman-jery sosialy # 2: Tokony hovahana haingana sy refesina mora foana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola
Te handrefy ny zava-bita ny orinasa ary hiverina amin'ny fampiasam-bola amin'ny haino aman-jery sosialy isaky ny bitsika na fanavaozana. Tahaka ny fandrefesana ny fahombiazan'ny tarika aorian'ny nahavitan'izy ireo ny gadona amponga voalohany. Ny fandefasana haino aman-jery sosialy amin'ny fampiasam-bola dia azo refesina rehefa avy manome lanja ny mpanatrika ianao, fa ny mpihaino (mihaino) dia lasa vondrom-piarahamonina (fizarana), ary manangana fahefana sy fahatokisana amin'ny indostriao ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila manamboatra mozika mahafinaritra ianao alohan'ny hanantenanao fiverenana! Ary koa, ny fiverenana amin'ny tambajotra sosialy dia mitombo rehefa mandeha ny fotoana - fananganana hery rehefa misarika ny mpihaino anao ianao ary manangana vondrom-piarahamonina iray izay manomboka mamerina ny hafatrao. Efa folo taona ity bilaogy ity ary tao anatin'ny 5 taona lasa dia nitombo ny vola niditra tamin'ny fananganana orinasa manodidina azy.
Hevi-diso momba ny haino aman-jery sosialy # 3: Tokony ho tompon'andraikitra amin'ny haino aman-jery sosialy ny marketing
Mifandraika amin'ny # 1 izany, saingy matetika ny orinasa dia mametra ny fandefasan-kafatra media sosialy amin'ny departemantan'ny marketing, izay matetika tsy vonona ny hamaly. Matetika ny marketing dia miavaka amin'ny marika sy ny fandefasana hafatra - fa tsy amin'ny famaliana. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fifandraisana amin'ny besinimaro ary ny varotra dia loharano ao amin'ny orinasanao izay manantena vina sy haino aman-jery isan'andro, mihaino sy mamaly ny ahiahy, ary mahatakatra ny fomba hiatrehana fanoherana. Ny fametrahana paikady media sosialy lehibe dia tsy maintsy ampidirina amin'ireo mpiasa ireo raha ny marketing kosa dia manampy amin'ny famolavolana ny fandefasana hafatra, ny fanaraha-maso ary ny fizarana amin'ny fantsona ary ny fandrefesana ny vokany.
Hevi-diso momba ny haino aman-jery sosialy # 4: Orinasa manaparitaka ny media sosialy
Mino ireo orinasa fa tsy maintsy lavorary ny fandefasan-kafatra amin'ny media sosialy, tsy misy lesoka. Isan'andro, isan-kerinandro, ary isam-bolana dia hitantsika ireo ohatra tsy mampino momba ny fomba nanaovan'ireo orinasa zavatra izay antsoin'ny mpampianatra haino aman-jery sosialy ho toy ny voina amin'ny media sosialy. Mety hadisoana izy ireo, saingy matetika no voina. Raha mijery ny lesoka tsy mampino rehetra ataon'ny orinasa amin'ny Internet ianao, ny ankamaroan'ny olona dia nanana TSY misy fiatraikany amin'ny varotra, ny vidin'ny stock na ny tombom-barotra. Afaka manao hadisoana tanteraka ny orinasa ary miarina tanteraka amin'izy ireo. Raha ny marina dia hitantsika ny toerana nanombohan'ny fikomiana noho ny hadisoana nampiroborobo ny varotra nataon'ny orinasa satria ny fantsom-baovao sy ny haino aman-jery sosialy hafa dia nanako ny olana mihoatra ny mety ho vidin'ny doka rehetra. Ny paikady dia tonga amin'ny famahana ny lesoka ary ny fanarenana dia mety ho tombony lehibe amin'ny orinasa satria mampiorina ny fahatokisana sy ny fahamendrehana amin'ny mpihaino.
Hevi-diso momba ny haino aman-jery sosialy # 5: Maimaimpoana ny media sosialy
Mahita, mandrindra, mamoaka, mamaly ary mampiroborobo ny marikao amin'ny media sosialy tsy afaka. Raha ny marina, raha manao asa mahatsiravina ianao dia mety ho fandaniam-potoana sy hery lehibe ho an'ny orinasanao. Mety handany anao ny varotra fa tsy ny fanaovana azy ireo akory. Eo amin'ny lafiny sehatra, ny fantsona media sosialy toy ny Facebook, Twitter, ary Pinterest dia atosiky ny mpamatsy vola azy hamidy… noho izany ny fahaizan'ny hafatrao hampiroborobo amin'ny media sosialy nefa tsy mividy mpihaino sasany dia mihena isan'andro. Ny fametrahana teti-bola sy loharanom-pahalalana hahitana, hikolokoloana, hamoahana ary hamaly amin'ny media sosialy hampitomboana ny fahafahanao tonga dia ilaina.
Manaiky sa tsy mifanaraka? Inona ireo hevi-diso hafa inoanao fa misy any?
Tags: Fahadisoanalesoka eo amin'ny orinasalesoka amin'ny haino aman-jery sosialymaimaim-poanahevi-disozava-dratsyfahadisoanaandraikitradiso ny media sosialyTetikasan'ny media sosialy
Ny resaka Marketing Marketing
Statin'ny Marketing amin'ny finday 25 ho an'ny taona 2014 izay
May 20, 2014 ao amin'ny 9: 32 PM
Betsaka ny orinasa mino fa ny fahombiazan'ny media sosialy dia azo aorina ao anatin'ny iray andro. Ny mpivarotra dia tokony hanome fampahalalana mifandraika amin'izany ary hanorina ny lazan'ny orinasany mba hamoronana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifany mba hahitana vokatra tsara kokoa amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny media sosialy.